PVC Coil CAR bonde MACHINE
PVC Car Mat Production Line ari kusanganisira mitsetse miviri, mumwe mutsetse ndechokuti coils, mumwe mutsetse ndechokuti musana (Spike shure kana vanoroverera shure) .Firstly, kuti coils kuti kubudiswa kubva PVC coils muchina, ipapo kuisa Coil panzvimbo pamwe PVC Mat musana dzaFord, kuti coils uye musana aigona kuva namira zvizere zvinoreva infra-tsvuku nemwaranzi hita.
zita PVC Coil Car Mat Machine
PART A PVC coils dzaFord
PART B PVC Spike shure dzaFord
Total yakaiswa chinzvimbo 350KVA
mushandi 3-4 vanhu
zvinhu PVC + Stablizer + OMR + ESBO + Vamwe
*1. PVC coils dzaFord
Production mutsetse nharaunda (L * W * H) 40m * 2.5m * 3.2m
akagadzawo chinzvimbo 260KW
Line havukavu 2.2-2.5m / Maminitsi
4.Adopting Siemens injini, ABB inverter, Schneider contactor, RKC tembiricha controller, inozivikanwa muchiso pamusoro zvemagetsi zvinoriumba kuitira vanoshanda nguva refu uye pose pashure-okutengesa basa.
*2. PVC Spike (chipikiri) shure dzaFord
Production mutsetse nharaunda (L * W * H) 17m * 3.3m * 2.5m
akagadzawo chinzvimbo 130KW
Line havukavu 4-5m / Maminitsi
1.Adopting akakura gearbox kuitira yakatsiga kumhanya uye-refu nguva vachishanda nguva.
3.Adopting L-zvakaumbwa-chinotenderera matatu calendering muchina, chinotenderera iri rinoparadzirwa pamwe water.Roller zviri nyore kuti vakaungana uye disassembled.
4.Adopting wakaiswa-urefu transversal aricheke uye mucheto aricheke.
5. nemafungiro Siemens injini, ABB inverter, Schneider contactor, RKC tembiricha controller, inozivikanwa muchiso pamusoro zvemagetsi zvinoriumba kuitira vanoshanda nguva refu uye pose pashure-okutengesa basa.
divi Kufara: 1220mm, ukobvu: 8-20mm, Length: customized
ruvara ruvara Single kana kaviri ruvara
mamiriro Waterproof, Dustproof, Flame retardancy, Anti-ngura, Anti-shrinkage